Mr. Pride VS Miss. Prejudice ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
ဒီကားလေးကတော့ 2017 April လောက်မှာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး Romance & Comedy movie လေးတစ်ခုပါ …
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျူးဟုန် ဟာချမ်းသာတဲ့သူဌေးသားလေးဖြစ်ပြီး … သူ့ချစ်သူကောင်မလေး မိုမိုကို propose လုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ပွဲမှာ … လူမှားပြီး ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မှားယွင်းပြီး
propose လုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ … ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …?
ကျူးဟုန် ကရော မိုမို နဲ့ အဆင်ပြန်ပြေသွားလား …?
ထျောင်နန်နန် ကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ …?
ပြီးတော့ကျူးဟုန်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရှောင်ကျန့်ကျွင်း ကလည်း ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ online game ရေးတဲ့စာရေးဆရာမလေးကို စတင်စိတ်ဝင်စားမိတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …?
ထျောင်နန်နန်ရဲ့ဖူးစာရှင်အစစ်ကဘယ်သူလဲ …? ဆိုတာဒီကားလေးမှာကြည့်ရူကြပါလို့
Maincast တွေအနေနှင့်ကတော့ –
ထျောင်နန်နန် အဖြစ် Dilraba Dilmurat ( The King’s Woman )
Translator : Sandar Lwin
Encoder: Anonymous X
Openload.co Myanmar769 MB Download Openload.co Myanmar769 MB Download
Trailer: Mr. Pride VS Miss. Prejudice ( 2017 )